🥇 ▷ Sirta Nintendo ee la xiriirta Wii iyo consoles kale ayaa la muujiyay ✅
Sirta Nintendo ee la xiriirta Wii iyo consoles kale ayaa la muujiyay
Maxaa soo daatay?
Haatan, waxay umuuqataa dhamaan baakadii ay wadaagayeen shabakadda oo dhan inay dhammaadeen 2 TBSi kastaba ha noqotee, waxaa la rajeynayaa in la sii daayo macluumaad dheeraad ah, oo aan arki doonno haddii ay xasaasi tahay. Waxaa ka mid ah faahfaahinta lagu arkay kumanaan faylasha la daabacay, lambarka koodhka ‘Wii Source code’ ayaa dhab ahaantii istaaga, faylasha qaar oo muujinaya sida qalabka kooneedku u shaqeeyo si faahfaahsan ugana shaqeyn doona sidii loo ogaan lahaa qaar ka mid ah waxyaabaha qarsoon ee Nintendo marka ay timaado ballaarinta qalabkooda.
Dhammaan macluumaadka la daabacay, waxyaabaha ugu xiisaha badan ee la raadin karo waa:
Koodhka isha qeybta waa 0/1/2
Jaantusyada iyo waraaqaha xog ee qayb kasta oo ka mid ah gudaha waxaa ka mid ah xaashiyaha AES / SHA
Dukumiintiyada BroadOn oo leh faahfaahinta qorshayaasha mustaqbalka iyo hirgelinta, oo leh API iyo dukumiintiyada softiweerka gudaha ah.
SDK iyo koodhka isha oo dhammeystiran ee nidaamka hawlgalka Wii (iOS)
Dukumiinti ku saabsan hirgelinta nidaamka min 2004 ilaa 2006
Lambarka isha ee maktabadaha Wii SDK (DVD, EXI)
Koodhka isha iyo macluumaadka soosaarka nidaamka
Dukumiintiyo macluumaad gudaha ah oo kala duwan oo Nintendo ah
Nooca gaarka ah ee soo saareyaasha kuu oggolaanaya inaad ku shaqeysato koodhadhka kaararka SD ee ku yaal Wii
Nintendo barta bandhigga gudaha
Sidoo kale, faylasha dhexdooda waxaa ku jira dhowr demo aruurin oo la sameeyay si ay u muujiyaan kartida Nintendo 64. Muuqaalka ayaa la soo diyaariyey oo lagu socodsiinayaa kuwa muujinaya si ay u arkaan waxa ay qarinayaan. Natiijadan, sida aad arki karto, waa mudaaharaad fudud oo ah jaantus polygonal ah iyo ciyaar fudud oo lagu muujinayo awooda garaafka waxa noqon doona console Nintendo cusub.
Halkee macluumaadku ka yimid?
Waxay u egtahay in dhammaan macluumaadkii laga soo qaatay server ka BroadOn, shirkad ay Nintendo sida caadiga ah la shaqeyso marka ay timaado aaladda. Marka la eego inay iyagu mas’uul ka yihiin soosaaraha qalabka wax lagu rakibo, ma ahan wax aan caadi ahayn in la ogaado hadda inay hayaan macluumaad xasaasi ah oo la xiriira xiidmaha aaladda.
Asalka Nintendo saaxiibkiisa code
Waxyaabaha kale, wax ayaa laga ogyahay sababta oo ah daadadkan aadka u weyn ee la xiriira Nintendo ee lammaanaha shabakada. Sidaad ogtahay, markaan saaxiibo cusub ku dari lahayn shabakadayada xiriirada, waa inaan galnaa lambar shaqsi ah, lamana wareejin karo ciyaartoy kasta oo aan dooneynno inaan ku darno.
Lambaradaani badanaa waxay ka careysiiyaan ciyaartoyga, sababtoo ah way adag tahay in la xusuusto lagana yaabo inaysan faa’iido u laheyn wadaagida isticmaaleyaasha kale. Laakiin midkee fikradaha Nintendo la yimid aragtidan? Sida muuqata, markii ay naqshadaynayaan shabakada internetka ee Nintendo, shirkaduhu waxay iska tuureen magacyo dhaqameed waayo waxay ku wareereen markii ay qorayeen waxayna badanaaba jahwareerin jireen markay ogaadeen inaad mashquul tahay.
Arrimahan, sida laga soo xigtay Nintendo, waxay saameyn ku yeelanaysaa waaya-aragnimada cajiibka ah ee ay shirkaddu isku dayeyso inay u gudbiso falsafadeeda, sidaa darteed waxay doorteen inay adeegsadaan lambarro fudud oo gabi ahaanba khaas ah oo kaliya u shaqeeya shaqadan. Faraxsan?
Maxaa ku dhici kara daadinta kadib
Waqtigaan, waxyeelada wadareed, in kasta oo ay yihiin wax ku ool, ma saameyn ku yeeshaan jihada shirkadda ee hadda. Ma jiraan tafaasiil waxyeello u geysan kara nidaamka hadda jira, sidaa darteed waa in la ogaadaa sida ugu wanaagsan ee sii-deynta wiilasha loo yaqaan ‘Source source code’ ay u saameynayso horumarka hadda jira iyo mustaqbalka Nintendo console.
Maalmahan goobtu dadku waa ay xoqayaan gacmahooda, sababta oo ah macluumaadka noocan oo kale ah waxay noloshooda ku soo kordhin karaan mashaariico badan oo ilaa hada xannibay xadidaadaha qaarkood, in kasta oo sida muuqata aysan badali doonin ansaxnimada kiiska kiisaskaas. Qaybta ugu xun ee waxaas oo dhami waxay ahayd in Nintendo ay si xun ugu dhufteen jabsashada akoonyadooda adeegga khadka tooska ah, iyagoo ugu yeeraya isticmaaleyaasha inay ku hawl galaan xaqiijinta badan akoonkooda si loo xoojiyo ammaankooda.